Izikhala ze-vegas awekho amakhodi ebhonasi ediphozithi 2019 - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izitshalo ze-vegas akukho amakhodi ebhonasi we-deposit 2019
Posted on October 25, 2018 Umbhali Andrew	Amazwana Off kuma-Slots of vegas awekho amakhodi wediphozithi we-2019
Izitshalo zeVasgas Casino ayikho idiphozi
Kukhona ithani leklabhu eku-inthanethi ene-Vegas egameni labo. Kulowo mbukiso obanzi ungafaka iSlots of Vegas. Lesi siphelelwe yisikhathi ngokumangazayo kepha kukhona ama-engeli athakazelisayo esizeni naphezu kokuhluleka kwaso sekwephuzile. Kokuthize okuthile, isayithi ligcizelela ukubanjwa kwezingosi eziku-inthanethi endaweni ephezulu yekhasi lazo okungasebenzi ngempela. Ngokusobala ungafika kumakhasi alo we-Facebook ne-Google Plus kepha ikhasi le-Facebook empeleni lifana nokubamba okungakuniki ithuba lokuzulazula ukuze ubheke ikhasi uqobo. Ekupheleni kosuku ungathanda Izitshalo ze-Vegas noma kunjalo awukwazi ukuyibona nge-media-based networking media.
Noma yiliphi isayithi elijabulela ukuthi ungadlala kanjani ngokushesha kwi-Mac yisayithi eligcine ukusebenza eminyakeni eyi-10 eyedlule. Ezingxenyeni ezisukela kule nkathi, kunabantu esincintisana nabo abadabukisayo kuneSlots of Vegas nokho lokhu noma kunjalo kuyisayithi elinezinsuku ezinkulu kakhulu ngemuva kwalo. Akukho lutho ngaleli sayithi okungakusiza ukuthi ujoyine kulo. Ngaphandle kokuthi uma unentshisekelo engavamile ngokufuna amasayithi amabi kakhulu emhlabeni, ungatshelwa ukuthi unikeze iSlots maqondana neVegas.
Mayelana nezitshalo ze-Vegas
Ukuvulwa kweVegas yisiza esibi kangangokuba asikwazi ukubhala igama laso ngokufanele ekhasini laso elithi Mayelana. Ngokuhamba kwesikhathi, uma kwenzeka uqhubekela phambili nekhasi elithi Mayelana uzothola ukuthi kunokuphambukiswa okungaphezu kwekhulu okufanele kudlalwe okungabalulekile kangako. Okuqukethwe kusayithi kubukeka sengathi kubhalwe ngumuntu onolimi lwendawo okungelona elesiNgisi, ngoba ingxenye enkulu yalo ayinaso imvumelwano noma isizathu futhi ifaka ongxiwankulu bokuphikisa konke ukuze kungabi kuhle. Kuyinkungu osebenza kule ndawo nokuthi iqala kuphi imvume yayo yokudlala. Ungalindela ukuthi amakhasi okuxhumana aku-inthanethi wekhasi lewebhu abesabekayo njengoba lokhu kungasasebenzi futhi kungabalulekile. Uma ubheka i-Slots of Vegas Facebook page nokho uzobona ukuthi inenombolo ephezulu kakhulu yokuthandwa kwamakhasi ngaphezulu kwama-100.
Ngokuya ngokuzibophezela okuthunyelwe ngakunye kunalokho kubonakala kunengqondo ukwamukela ukuthi cishe okungama-25,000 kwalokhu okuthandayo kuyathengwa. Zonke izinto ezicatshangelwe ukuthi zifinyelela kwenye indawo ebangeni lokuthandwa kwekhasi elingu-0 nelingu-1 kokuthunyelwe ngakunye. Ngokuya kokufakwa kwamakhasimende, isiza sinokulinganiselwa okungu-4 kokungu-5 okuxhomeke enanini elifanelekile lokucwaningwa kwamabhuku ngakho-ke akubonakali ngathi kukhulu kakhulu kuleyo ndaba. Inabalandeli abaningi be-Twitter futhi, kepha futhi, lokhu kuthengwe ngokuphelele ngesizathu sokuthi ukuzibophezela kwekhasi kuhambisana no-zero. Kungasiphi isizathu iklabhu eliku-inthanethi lincela inani elikhulu kangaka empilweni esekwe kuwebhu? Ukuqhubekela phambili futhi kukhona ukufinyeleleka kwamakhasimende okubandakanya i-imeyili kanye nenombolo yamahhala e-USA noma eCanada kanye nezinkulumo ezibukhoma ezingeziwe.
Ungagcina izimpahla ku Izitshalo ze-Vegas yi-MasterCard noma i-Visa, futhi ngeke nje ukwazi ukukwenza kuphela kuwebhu, kodwa ungayenza ngocingo uma kwenzeka. Ukukhetha okuhlukile kuyi-Neteller efinyeleleka lapho kwenzeka ngaphandle kwe-US noma eCanada naseBitcoin okuyinto ethakazelisayo. Ngokuphathelene namasu okuhoxisa, ungasebenzisa iNeteller, ukushintshaniswa kwentambo kanye nabanye abambalwa.
Kunzima ukuthola ukuthi kuthatha malini ukucela ukuhoxa ukuze kusingathwe ngenxa yokuthi akuchazwanga. Kubukeka noma kunjalo ukuthi ukuhoxiswa kwentambo yasebhange okuncane kakhulu kuhlala ku- $ 200 futhi kungathatha cishe izinsuku eziyi-8 ukuthi kwenziwe isheke lasebhange. Ngaphambi kwalokho, kunzima ukuqoqa noma yini kusuka kuleli sayithi enendlela yokunganaki eyenza kube nzima ukuyifunda. Mayelana nokuguquguquka kwezinto, ungazami.
Kunomvuzo owamukelekile we-250% uma ujoyina Izitshalo ze-Vegas. Lokhu kusebenza ezikhaleni naku-keno futhi kunesidingo sokubheja esingu-5x esibonakala sikhululekile impela, ngoba lokhu kuyindlela yokudlala ephansi kakhulu kunaleyo oyothola ekilabhini ehlukile. Kunzima ukuthola inani ngqo ongaligcina ukuze uzuze kulokhu kunikezwa. Uma ujoyine kusayithi, kukhona ukuthuthuka kosuku nosuku noma okuthize okuthinta kepha lokhu akuchazwa ngokufanele. Kuyindaba efanayo neklabhu ye-VIP engakudaluli futhi noma yini oyiphawulayo. Konke okuzofunda ukuthi ukuvusa isibhamu esishisayo, kufanele wenze isitolo kunoma yikuphi umcimbi $ 500.
Gcina i- $ 1,000 ukuze uzuze isiliva, $ 5,000 ukuze uzuze igolide kanye ne- $ 10,000 ukuze uzuze iplatinamu. Kuyavikeleka ukwamukela ukuthi akekho umuntu owake wazuza iplatinamu ngezizathu zokuthi akukho sizathu sokushiya kungani kungadingeka. Kukhona uhlobo lohlelo lokufeza okusethwe kulo Izitshalo ze-Vegas futhi okukuvumela ukuthi wazi lutho ngokoqobo. Ubuhle impela, futhi kukhona nomncintiswano wezikhala okulindele ukuthi ulande izinhlelo ozozidlala. Leyo yindlela ephelelwe yisikhathi ngayo le kilabhu yokugembula; Abadlali bayo abangabaphathi bangahle bafune ukulanda izinhlelo ukuze nje badlale imidlalo yokuzijabulisa abangayazisa ohlelweni lwabo kwenye indawo yokudlalela.
Imidlalo emangalisayo ye-Casino
Ukunciphisa eSlots of Vegas kuyingozi kakhulu. Lokhu akukona okwejwayelekile, noma kunjalo, ukuze udlale ingxenye enkulu yabo, kufanele uqalise izinhlelo kwikhompyutha yakho ye-Windows noma yama-Mac. Kunzima kakhulu ukutshela ngokuqondile ukuthi yikuphi okungafani okufinyeleleka khona lapha ngenxa yokuthi uthola nje isichazamazwi esincane sokukhetha. Okunye kushiywe amandla akho okudala.
Le sayithi indala kuze kube seqophelweni lokuthi ukuzijabulisa okutholakalayo kuqoshwe kulayini omude wokuqukethwe. Ungadlala ukuhlelwa kabusha okufana ne-Field of Green, Crazy Vegas, High Rollers kanye nezinqwaba zezinye izikhala ezibuthuntu ezingakaze zibonwe kwenye indawo kuwebhu isikhashana. Ufanelwe inani elikhulu kangako lokuphakama kuneSlots of Vegas.
Izikhala zeVegas yisiza obekufanele ngabe sikhishwe ebuhlungwini baso kudala. Zama ukungazami ukuyivakashela, ungazami ukuyijoyina futhi ungazami ukwethula umkhiqizo wayo ozowudlala. Konke okuphathelene naleli sayithi, kusuka eziteshini zalo zokuphila eziku-inthanethi kuye ekuthuthukisweni kwalo, konakele. Ngokusobala abekho abadlali abasadlala ngempumelelo lapha yize kukhona ukugxekwa ekhasini le-Facebook ukuncoma ukuthi kwesinye isikhathi kube nokufana okuthile kunethiwekhi esebenzayo.
Leli qembu labantu linamathuba amaningi kunalokho kusukela kudala laphuma esakhiweni, kepha kunzima ukusho ngokudlula ngamakhasi empilo aku-inthanethi. Ngaphandle kokuthi ngubani odlala lapha, akunamthelela, ngoba noma ngabe le bekuyi-clubhouse eyaziwa kakhulu emhlabeni, ungakhetha ukungabambi iqhaza neningi futhi ujoyine lapha. UDodge.
I-Vegas Online Casino Awekho Amabhonasi Amadayimenti:
I-Las I-Vegas USA (9280)
Izintambo Vegas (8923)
Vegas Izinsika (9219)
Ibhonasi ye-casino ephezulu kakhulu:
I-85 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-LVbet Casino
I-45 yamahhala i-casino e-RealDealBet Casino
I-80 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-MondoFortuna Casino
I-115 yamahhala e-Norges Casino
I-50 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-VegasPlay Casino
I-55 yamahhala i-casino e-CrazyScratch Casino
I-50 ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-Glorious Casino
I-170 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino e-Royaal Casino
I-115 yamahhala i-casino e-AllBritish Casino
I-70 yamahhala i-bonus e-Ladbrokes Casino
I-155 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Nettiarpa Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi e-huone Casino
I-165 ayikho ibhonasi yediphozi ku-Playamo Casino
I-35 yamahhala i-spin casino eSoartan Casino
I-125 yamahhala i-spin casino eKolikkopelit Casino
I-50 yamahhala e-Energy Casino
I-160 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-NorskeAutomater Casino
I-130 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino eHopa Casino
I-170 ayikho ibhonasi yediphozi e-BGO Casino
I-65 yamahhala e-Suomiarvat Casino
I-105 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino ku-DiamondWorld Casino
I-15 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-EuroLotto Casino
I-45 yamahhala i-casino e-Bingo Casino
1 Mayelana nezitshalo ze-Vegas
2 Ukuvulwa kweBhange
3 Izikhala Zokukhuthazwa
4 Imidlalo emangalisayo ye-Casino
5 Umzamo Omubi
6 I-Vegas Online Casino Awekho Amabhonasi Amadayimenti:
7 Top 10 Kuhle Europe Amakhasino Online 2021:
8 Top 10 Kuhle USA Amakhasino Online 2021:
9 Ibhonasi ye-casino ephezulu kakhulu: